Imigomo nemibandela Yezinsizakalo Ezijwayelekile Zezinkampani Nezinkampani Inc.
Kulesi Sivumelwano ("Isivumelwano") "wena" kanye "nesakho" kubhekisa kukhasimende ngalinye, "thina," thina, "" wethu, "" GCS, "kanye" nenkampani "kubhekiswe kuGeneral Corporate Services, Inc. (lokho ilawula amagama ezimpawu Izinkampani Ezihlanganisiwe, Abahleli Bokuvikelwa Kwempahla, Inkampani Yezwe, kanye neminye imikhiqizo namawebhusayithi), osonkontileka bayo, abenzeli, abasebenzi, izikhulu, abaqondisi kanye nezinhlangano futhi "Izinsizakalo" zibhekisa kuzinsizakalo ezinikezwa yithi. Lesi Sivumelwano sichaza izibopho zethu kuwe nezibopho zakho kithina njengoba zihlobene Nezinsizakalo. Ngokusebenzisa Izinsizakalo ezingaphansi kwalesi Sivumelwano, uyavuma ukuthi ufunde futhi uyavuma ukuboshwa yiyo yonke imigomo nemibandela yalesi Sivumelwano nanoma yimiphi imithetho noma izinqubomgomo ezihambisanayo noma ezingashicilelwa yithi. Uyavuma ukuthi ungaphezu kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, noma ngabe usufinyelele eminyakeni yobudala egunyeni lakho.
Ngokulandela lesi Sivumelwano, i-GCS izokwenza usesho lokuqala, olungabophi lwegama lokuthola ukuthi igama lenkampani olikhethile selivele liyasetshenziswa yini enye inkampani ezweni lakho elikhethiwe, esifundazweni noma ezweni. (Inkampani, inkampani enesikweletu esilinganiselwe, kanye / noma izinhlobo zebhizinisi ezifanayo zisetshenziswa ngokushintshana lapha lapho kufanele khona.) Uma igama lebhizinisi lakho elikhethiwe lingatholakali, i-GCS lapho (ngokulandelana kokukhetha okusohlwini lwakho kuhlelo lwakho lokusebenza) isesha enye inkampani amagama owanikezile kuze kube yilapho imiphumela yosesho iveza igama lenkampani elitholakalayo. Esimweni lapho ungafaki umklami wezinkampani ofanele (okungukuthi, “Inc.,” “Corp.,” noma “Corporation”) i-GCS izokwengeza i- “Inc.” (noma i- "LLC" yezinkampani ezinesikweletu esilinganiselwe) isijobelelo lapho ufaka izwe lakho elikhethiwe, isifundazwe noma izwe.
Uyavuma ukuthi unesibopho sokupelwa kwegama lamagama wenhlangano oyinikezile. Uyavuma ukuthi uhlole kabili ukuthi amagama ezinkampani alapha apelwe njengoba ufisa. Uyaqonda ukuthi lesi sicelo asiphindeki emuva kokufaka isicelo sakho.
Ngenkathi senza yonke imizamo yokuthola ulwazi olusanda kwenziwa, asikwazi ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yakamuva kakhulu ngokutholakala kwegama lenkampani inikezwe thina. Ngakho-ke, asiqinisekisi ukuthi igama liyatholakala ukuze lisebenzise njengegama lebhizinisi esifundazweni sakho, esifundazweni noma ezweni lakho. I-GCS ayinasibopho nganoma iyiphi indlela yokuncika ekutholakaleni kwegama lebhizinisi. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi ungaziphrinti izinhlamvu zamagama, amakhadi webhizinisi noma wenze noma yiluphi utshalomali egameni uze uthole isiqinisekiso sikahulumeni sokuthi igama selivunyelwe futhi nenkampani ifakiwe.
Uma kwenzeka igama lakho lezinkampani nezinye izindlela zingatholakali futhi unganikeli ngezinye izindlela ngokubhala ngosuku lwe-oda lakho, ugunyaza i-GCS ukufaka amagama athi “Enterprises,” “Holdings,” “Management,” “Ventures,” noma “Inhlokodolobha” kuze kube sekupheleni kwegama. Uma izindlela ezinjalo zingatholakali ikhambi lakho kuphela elizokhawulelwa kuzimali ezikhokhelwe i-GCS. Bona isigaba SOKUBUYISWA KWEMALI NESIKWELETU lapha ukuthola eminye imininingwane.
Ngeke futhi singabheki ukubona ukuthi igama lenkampani olikhethayo, noma ukusetshenziswa okwenzayo kwegama lebhizinisi, kwephula amalungelo asemthethweni abanye. Siyanxusa ukuthi uphenye ukuze ubone ukuthi ngabe igama lebhizinisi olikhethayo noma ukusetshenziswa kwalo liphula amalungelo ezingokomthetho zabanye, futhi ikakhulukazi siphakamisa ukuthi ufune izeluleko zabeluleki abanekhono abanamalayisense okusebenzisa umthetho endaweni efanele.
Uma i-oda lenkampani yase-US likhanseliwe ngemuva kokuthi kuthathwe inkokhelo yi-GCS kodwa ngaphambi kokuthi kuphothulwe ukubhekwa kwegama, i-GCS izobuyisa inani le-oda eliphelele ngaphansi kwezindleko ezitholakele kanye nemali eyicubungula engu- $ 95 dollar. Uma i-oda likhanseliwe ngemuva kokuthi isheke seliphothuliwe kepha ngaphambi kokuthi kudalwe imibhalo yokwakhiwa, i-GCS izobuyisa inani le-oda eliphelele ngaphansi kwemali engu- $ 125 yokucubungula. Uma i-oda likhanseliwe ngemuva kokuthi kudalwe imibhalo yokwakhiwa, i-GCS izobuyisa inani eliphelele le-oda ngaphansi kwemali ekhokhwayo yokucubungula eyi- $ 195 dollar uma nje idokhumenti yokwakheka ingakahanjiswa kuhulumeni. Nge-oda lenkampani engaphandle kwe-US, uma i-GCS igunyaza ukubuyiselwa kwemali imali ebuyiselwe ephezulu inani elikhokhelwe ngaphansi kuka- $ 495 noma amaphesenti angamashumi amabili entengo yokuthenga. Ngaphezu kwalokho, imali ekhokhelwe i-GCS esevele ikhokhelwe uhulumeni ngokufaka amafayili, kwababambisene nabo, abahlinzeki noma abanye izindleko zokufeza i-oda lakho ayibuyiswa, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, imali ekhokhwa ngokusebenza kwekhadi lesikweletu.
Uma inkampani noma idokhumende selithunyelwe kuhulumeni ukuthi lifakwe egameni lekhasimende noma i-trust noma enye idokhumenti seyenziwe lo myalelo awunakubuyiselwa imali noma ukhanselwe.
Imali ye- $ 75 izengezelelwa kuwo wonke amasheke abuyiselwe kwa-GCS ngenxa yezimali ezinganele noma ama-akhawunti avaliwe. Ngaphezu kwalokho, kuzokhokhiswa imali ekhokhwa insizakalo yasebhange kulawa masheke.
Ngaphezu kwalokho, ngenkathi i-GCS izokwenza imizamo emikhulu yokwamukela amakhasimende ethu, kungenzeka iphutha elenziwa ngomshini noma elenziwe ngabantu. Ngakho-ke, uma nganoma yisiphi isizathu isicelo sakho sokufakwa, isicelo sokwakheka kwe-LLC, isicelo sokuthembela, ukusesha kophawu lwentengiso noma isicelo sokulungiselela ukwenziwa kophawu lwentengiso noma esinye isicelo sibambezeleka ngokungenangqondo, sichithwe, sabekwa endaweni engeyiyo, noma sashoda ngenye indlela, i-GCS NGEKE IBHEKE NANOMA YILUPHI OLUFANELEKILE, NGOKWENZEKA, NOMA UMONAKALO WOKUPHELELISA. ISILUNGISELELO SAKHO SODWA NE-GCS SIZOBA UKUBUYISELWA KOKUGCWELE KWANOMA YINI NAZO ZONKE IZIMALI EZIKHOKHELWA I-GCS NGEZINKONZO ZETHU NJENGOBA ZIVUMELEKILE NGAPHANSI KWALE MIMISELO NEMIBANDELA.
Uma kwenzeka kufakwe i-oda lokujaha, sizokwenza konke okusemandleni ukuqeda ukufakwa kwenhlangano ngokuhambisana nesicelo sakho. Ngoba i-GCS yenza wonke umzamo wokuqinisekisa ukuphelela nokugcwaliseka kokugcwaliseka kwenhlangano yakho, asiqinisekisi ukuthi i-oda lizofakwa ngesikhathi osicelile. Uma kwenzeka i-oda lakho lokujaha lingafakwanga ngesikhathi, ikhambi lakho lodwa lizonqunyelwa ekubuyiselweni kwemali ekhokhwayo yokugcwalisa okusheshayo.
Uma ukhokhe ngesheke ngesikhahlamezi, hlola ngocingo, nge-inthanethi, nge-ACH noma ngendlela efanayo, kuzobanjwa i-oda lakho kuze kube yilapho ibhange lethu liqinisekisa ukuthi inkokhelo yakho isisuliwe. Isikhathi esijwayelekile izinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu zebhizinisi, kungafakwa izimpelasonto noma amaholide asebhange. Lesi sikhathi sincike ebhange hhayi i-GCS. Ngemuva kokuthola isiqinisekiso sokuthi izimali sezisuliwe siqala ukucubungula i-oda lakho.
I-GCS iya emzameni omkhulu ukuxhumana namakhasimende. Kodwa-ke, yonke imilayezo yocingo, ama-imeyili noma ezinye izindlela zokuxhumana kungenzeka ingatholi mpendulo ikhulu lamanye lesikhathi.
Kufakwa i-oda ngesikhathi ingeniswa kwa-GCS nge-Intanethi, ngocingo, ngefisili noma nge-imeyili. Ukuguqulwa kungenzeka kwenziwe ku-oda lakho ngemuva kokuthumela ngaphandle kokugunyazwa kwangaphambili yi-GCS. Ngemuva kokuthola ukugunyazwa kwangaphambili, ukuguqulwa kwe-oda kusebenza kuphela ngemuva kokuthi i-GCS ithole isicelo esisayiniwe esibhaliwe esivela kuwe nge-facsimile. Kukhona izindleko zezezimali nesikhathi ukufeza i-oda. Ngakho-ke, noma yiziphi izicelo zokukhanselwa kufanele zithunyelwe futhi zitholwe yithina ngerejista yemeyili ebhalisiwe eceliwe noma kwifomu lethu lokuxhumana ku-https: //companiesinc.com/ 24 amahora webhizinisi ngaphambi kokuthumela i-oda lakho enhlanganweni kahulumeni yokugcwalisa noma ngaphambi kokuba inkonzo ihanjiswe. kuhlinzekiwe. Amahora webhizinisi amaningi ezinsukwini zamasonto yi-6: 00 AM to 5: 00 PM PST ngaphandle kwamaholide ezwe.
Ezinye iziphathimandla zidinga ukuthi unikeze ngemibhalo efanele ngaphambi kokuba inkampani ifakwe noma ihanjiswe. Le mibhalo ingafaka kepha ingahle ingalinganiselwe kwikhophi ebhalwe phansi yepasipoti, isikweletu sosizo sokuqala, izitatimende zebhange, kanye / noma incwadi eyinkomba yasebhange. Kwezinye iziphathimandla, singafayela kepha asikwazi ukuletha inkampani yakho ngokusemthethweni uze unikeze imibhalo. Kwezinye iziphathimandla esizikhokhelayo kepha asikwazi ukufaka inkampani yakho kuze kube yilapho unikela ngemibhalo edingekayo. Eminye imisebenzi idinga imibono yezomthetho. Eminye imibhalo ingadinga ukuhunyushelwa esiNgisini noma kolunye ulimi. Uma kunezimali ezikhokhwayo zalezi zidingo ezingeziwe, unesibopho sazo. Sithwala izindleko zokusungula inkampani njengezimali zikahulumeni nezama-ejenti futhi lezi zimali ngeke zibuyiselwe kithi. Nawe, uyavuma ukuthi unesibopho sokuhlinzeka ngemibhalo edingekayo yokuzikhandla efanele, ngaphandle kwesicelo, nokuthi imali ebuyiswayo ayitholakali uma ungathobeli umthetho wokukhuthala okufanele.
Ukwaneliseka kwekhasimende kusho okukodwa noma okulandelayo: (1) ukuthi amadokhumenti amukelwa ukufayila nefayili aqiniswe yisikhungo sikahulumeni, noma (2) ukuthi amadokhumenti ayalile abhalwa futhi ahanjiswa ngumbambeli ojwayelekile, ukulethwa ngogesi noma ezinye izindlela noma (3) izinsizakalo ezi-aliwe zenziwe. Uma noma yikuphi okungenhla kuyiqiniso nganoma iyiphi ingxenye ye-oda, uyavuma ukuthi wenelisekile ngalo lonke i-oda.
SIFUNA ZONKE IZIMALI, UKUQINISEKISA OKUNYE NOKUXHUMANYELWA, ZOKUFUNDA OKUNGCONO KANYE UKUTHOLA INJONGO EBALULEKILE. Ezinye izinkantolo azivumeli ukukhishwa kwewaranti ebekiwe, ngakho-ke ukukhishwa okungenhla kungenzeka kungasebenzi kuwe.
Kungaba nezimali ezengeziwe zikahulumeni noma ezinye izimali okufanele zikhokhwe ngemuva kokuthi inkampani yakho noma enye idokhumenti isunguliwe noma yafakwa kufayili futhi / noma yadluliselwa kuwe. Isibonelo, i-US State of Nevada idinga ukuthi uhlu lwezikhulu luzofakwa maduzane ngemuva kokuthi inkampani ifakiwe. Ngalesi sikhathi sokubhala imali yokufaka yi- $ 150 kanye nemali yelayisense yebhizinisi eyi- $ 500. Esinye isibonelo ukuthi uMbuso WaseCalifornia unentela ekhokhwa minyaka yonke yama-franchise ekhokhwa ngamanani ahlukahluka kuye ngemali engenayo yenkampani ebekiwe. Uma uthenge inkampani endala / eshalofini, imali yokuvuselela ingakhokhwa ngemuva kosuku lwakho lokuthenga. Ngoba lezi zimali azikho ngenxa yokufayilwa kokuqala kwenkampani, i-GCS kungenzeka ingakukhokhisi ngalesi sidingo sokugcwalisa esilandelayo ezindlekweni ezijwayelekile zokuqala zokufaka. Uzocelwa ukuthi ukhokhe imali elandelayo, izwe, i-ejenti kanye / noma ezinye izimali ngaphambi kosuku olubekiwe ukuze ugcine inkampani yakho noma elinye ibhizinisi limi kahle ezweni noma ezweni lokwakheka. Kudingeka futhi ukuthi ugcine umenzeli obhalisiwe wensizakalo yenqubo yezomthetho ezweni noma ezweni lokufakwa kanye nanoma yimaphi amandla lapho inkampani yakho, ngokwamandla athile, yenza ibhizinisi. Uma i-GCS ikukhokhela ukuvuselelwa kwenhlangano yakho esemthethweni, sithambekele ekwenzeni kahle ngaphambi kosuku olubekiwe. Lokho kungenxa yokuthi imvamisa kuba nezinhlawulo, izimali ezikhokhwa sekwedlule isikhathi, izinhlawulo kanye / noma nokuchithwa okubekwe ezinkampanini ekufakeni ngemuva kwesikhathi. Ukukhokhisa ngaphambi kwesikhathi kusinikeza isiguqo sokusiza ukuvimbela uhulumeni noma elinye ibhizinisi emiphumeleni yokufaka sekwedlule isikhathi. Kungumsebenzi wakho hhayi owe-GCS ukugcina ithuluzi lakho elisemthethweni limi kahle. Kunezimali zokuvuselela amatrasti aphesheya ezibandakanya, kepha hhayi kuphela ezilinganiselwe, izimali eziphathisiwe kanye nezimali zikahulumeni. Ngokwalokhu kubhalwa imali yezinsizakalo ezibhalisiwe zama-ejenti ingama- $ 189 ngonyaka kunoma isiphi isimo sase-US kanye no- $ 245 ngonyaka kunoma yisiphi isifundazwe saseCanada. Imali yokuvuselela iyahluka kwamanye amazwe. Uma ungakhokhi imali yakho yokuvuselela nohulumeni futhi inkampani yakho ingena ohlotsheni oluthile lokumehlisa uhulumeni (igama elishiyana ngezwe), lokho kuyinkomba yakho yokuthi awusayifuni inkampani. Uma ungazisi i-GCS ngenye indlela ngokubhala ngaphambi kokuma kwayo okwehliswayo okuvunywa ngokubhaliwe ngabaphathi, unikeza i-GCS imvume yokubeka inkampani okhombise ukuthi awusafuni ukuyithengisa njengenkampani endala, lungisa igama layo kanye / noma buyisela ukuma kwayo.
Imithetho ethile yombuso idinga ukuthi inkampani ishicilele ubukhona bayo ephephandabeni eliqokiwe. I-GCS, ngokuthanda kwayo, ingenzela iklayenti lo msebenzi, ikakhulukazi uma kudingeka kumhlanganisi noma kumhleli webhizinisi. Izitatimende kuwebhusayithi yethu zokuthi ukwakheka "Inani lifaka imali yokushicilela lapho kudingeka khona" kusho lapho kudingeka khona kumhlanganisi noma umgqugquzeli. I-GCS ngeke ishicilele noma ikhokhe imali yokushicilela ezifundazweni ezithile, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho, izidingo zokushicilelwa kweNew York Limited Liability Company. Uyaziswa ukuthi uma ucela ukwakhiwa kweNew York LLC ukuthi izidingo zokushicilelwa zingabiza kakhulu kunokwakheka kokuqala kwe-LLC uqobo futhi uzoba nesibopho salezi zimali.
UKUZEZA NGOKUSEMTHETHWENI noma kwezezimali KANYE NOKUGUQUKA
I-GCS iyinsizakalo yokushicilela ye-inthanethi. Izinto ezisetshenziswayo kule webhusayithi zinemininingwane yokusetshenziswa okujwayelekile futhi azihloselwe ukufaka izeluleko zommeli. Ngenkathi abasebenzi bethu beqhakambisa imizamo emikhulu yokugcina nokushicilela imininingwane efanele, imithetho Yombuso, Yesifundazwe neye Federal ihamba ngamandla futhi ihlala ivela. Ngaphezu kwalokho, imithetho ivulekile ekuchazeni okuhlukile futhi ihluka kakhulu phakathi kwezindawo ezihlukile.
Lapho usebenzisa insiza yethu, uzobe usebenza njengommeli wakho. I-GCS igcwalisa imininingwane kumafomu adingekayo ngokususelwa kulwazi osinikeze lona ekulethweni kwakho kwe- "Isicelo Sokuhlanganiswa" noma "se-LLC Formation" bese ifaka amafomu afunekayo nombuso ofanele, isifundazwe noma i-federal agency. Ngokukunikeza le sevisi, i-GCS, abeluleki bayo, abenzeli bayo, abamele, kanye nabasebenzi abanikezeli ngezeluleko noma insizakalo yezomthetho, yentela noma ngenye indlela, futhi azikho izethulo noma amawaranti, avezwe noma ashiwo, anikezwa maqondana nemiphumela yezomthetho noma eminye imiphumela. okuvela ekusetshenzisweni kwezinsizakalo zethu noma amafomu.
I-GCS, abeluleki bayo, abameli, abamele kanye nabasebenzi abazibandakanyi emisebenzini yomthetho futhi abakwazi ukukunikeza izeluleko zomthetho. Yize i-GCS isebenzisa imizamo emikhulu futhi ihlonipha uhlobo oluyimfihlo lolwazi oluthumela kithi, AKUKHO BUHLELO BOKUKHOLO noma ilungelo elikhona phakathi kwe-GCS nawe, kufaka phakathi kepha kungagcini kunoma yikuphi ukuhlangana kweGqwetha-iKlayenti okungenzeka ukuthi ubekhona uma uke wahlangana nommeli onelayisense .
Uma ukhuluma nommeli ohlangene ne-GCS, uyavuma ukuthi akukho lutho okufanele luthathwe njengeseluleko sezomthetho kunoma yiliphi icala noma isimo. I-GCS kanye / noma abameli abasebenzisana nabo banikela ngemininingwane ejwayelekile kuphela, ababeluleki bezentela, futhi abakaze futhi ngeke bakunikeze nganoma yisiphi iseluleko sezomthetho, sentela noma sokuhambisana maqondana nezinsizakalo zethu. Uzodinga ukufuna izeluleko ezizimele zomthetho nezentela. Iningi noma wonke amabhizinisi adalwe i-GCS enzelwe ukuthi angathathi hlangothi entela nokuthi noma iyiphi imali etholakele, noma ngabe ivela ebhizinisini lasekhaya noma laphesheya, ibikwa ngonyaka otholakele kungakhathalekile ukuthi lezo zimali zikhishwe ebhizinisini noma zibuyiselwe esimweni lapho izinhlangano zomhlaba wonke. Ngaphezu kwalokho, noma yiluphi ulwazi olutholwe ku-GCS kanye / noma izinkampani ezixhunyanisiwe kanye / noma abameli (aba) aluhloselwe ukudala, futhi ingxoxo, ukwamukelwa, ukubukwa noma omunye umqondisi noma ukuxhumana okungaqondile akubumbanga, ubudlelwano bommeli neklayenti kanye nanoma yiziphi izimali ezikhokhiwe akufanele zithathwe njengezimali zomthetho.
Njengazo zonke izindaba zebhizinisi ezibalulekile, i-GCS, abeluleki bayo, abamele, abamele, kanye nabasebenzi batusa ngokuqinile ukuthi ubonisane nommeli onelayisense lokusebenzisa umthetho ne-CPA enelayisense ekuphatheni okuphathelene nokwakhiwa kwenhlangano yakho, i-LLC, ukwethenjwa noma omunye umkhiqizo noma insizakalo esihlinzeka ngayo nokuqhubeka kwayo kokusebenza.
Imali, imali ekhokhwayo nethempeli
Njengokucatshangelwa kwamasevisi owakhethile, uyavuma ukusikhokhela izindleko zamasevisi (ez) sisebenzayo. Zonke izimali ezikhokhwa ngezansi azibuyiswa ngaphandle kokuthi sinikeze ngenye indlela. Ngokucutshungulwa okuqhubekayo kwezinsizakalo, uyavuma: (1) ukuhlinzeka ngolwazi oluthile lwamanje, oluphelele nolunembile ngawe njengoba kudingeka ngenqubo yesicelo futhi (2) ulondoloze futhi ubuyekeze lolu lwazi njengoba kudingeka ukuze ulugcine lukhona, luphelele futhi lunembile. Yonke leyo mininingwane izobizwa ngemininingwane ye-akhawunti (“Imininingwane ye-Akhawunti”).
Ngale ndlela usinikeza ilungelo lokudalula kwabanye abantu imininingwane enjalo ye-akhawunti. Ngokugcwalisa nokuthumela isicelo sokubhaliswa kwegama lenkampani, umele ukuthi Ulwazi lwe-Akhawunti kuhlelo lwakho olulungile nokuthi ukubhaliswa kwegama Lenkampani elikhethiwe, ngokwazi kwakho, akukuphazamisi noma kwephule amalungelo abo noma iyiphi ingxenye yesithathu iphathi. Umelele ukuthi igama lebhizinisi alibhaliswanga nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni.
Uma ucela amasheya agunyaziwe ku-Imibhalo Yakho Yokuhlanganisa engaphezulu kwenani eliphakeme lamasheya avumelekile wombuso wokugcwalisa okhethwe, isifundazwe noma izwe ngemali encane yokugcwalisa, unesibopho sazo zonke izimali zentela ezitholwe nganoma yisiphi isikhathi . Abanye, kepha hhayi bonke, abomthetho bakhokhisa imali yokugcwalisa eyengeziwe lapho inani lamasheya kanye / noma inani eliphelele lesitoko likhuphuka. Kungumsebenzi wakho ukuphenya inani eliphakeme lamasheya avumelekile wombuso, isifundazwe noma izwe ukuthola imali encane yokugcwalisa. Inani lokwabelana okugunyaziwe ku-Articles of Incorporation yakho kukhethwe ngokubona kwakho. Uma ungasifundisi ngenye indlela, isakhiwo esijwayelekile sesitoko samasheya we-1500 ngaphandle kwenani lesilinganiso ngaphandle kokuthi yiziphi izinombolo zesiko ziyahlukahluka endaweni ethile noma amasheya ambalwa afanelwe imali yokugcwalisa ephansi.
Lapho kusebenza, i-GCS iletha imibhalo ehhovisi likahulumeni elifanele ukuze ifayilishwe. Lapho abakwa-GCS bethola le dokhumenti ehhovisi likahulumeni, i-GCS, yona, ithumela leyo mpahla kuwe ngokuya ngephakheji oyalile. Uyavuma ukuthi ihhovisi likahulumeni, hhayi i-GCS, lilawula izinhlaka zesikhathi lapho kufakwa khona amaphepha enkampani bese libuyiselwa kwa-GCS.
Ngemuva kokufakwa kwebhizinisi, uma ikhithi yenkampani noma incwadi yamarekhodi ezinkampani ifakiwe ne-oda, izokwenziwa ngemuva kokuthi igama lenkampani lifayilisiwe futhi lamukelwa nguhulumeni. (Isizathu salokhu ukuthi akunakwenzeka uku-oda ikhithi yenkampani kuze kube uhulumeni uvumela leli gama ukuze kungakhiwanga ikhithi enegama elahliwe nguhulumeni.)
UKUFAKA ISIMEMO NOKUFAKA IZIMALI
I-GCS ayinasibopho sokukweluleka noma ukukukhumbuza nganoma iziphi izidingo noma izibopho, kufaka phakathi, kepha kungagcini kwimibiko yonyaka, ukufakwa kwentela, izintela okufanele zikhokhwe, noma izwe, izifundazwe, izifunda noma izimfuneko zokushicilelwa zombuso noma izimali ezihambisana nomkhiqizo noma insizakalo ukuhlinzekela kuwe. Ngokubhalwa kwalokhu kune-3,007 e-United States enezidingo ezahlukahlukene zokufaka amafayili nezimali. Ngenxa yenani lezifunda nezinye iziphathimandla kanye nemithethonqubo eguquguqukayo, kuyisibopho sakho ukucwaninga ngezimali zokufaka, izintela nezinye izidingo zesifunda sakho, isifunda, izwe, izwe noma enye indawo efanelekile. Ukubandakanyeka kwe-GCS kumkhiqizo noma kwensizakalo yakho kunqamuka lapho umkhiqizo noma insizakalo yakho idalwa. Noma iziphi izidingo noma izibopho zokondliwa komkhiqizo noma kwensizakalo yakho AKUSONA isibopho se-GCS futhi kungukuphela kwesibopho sakho. Ikakhulu, ngaphandle kokuthi unenkontileka yokuthi i-GCS yenze njalo, noma yiziphi izidingo zombuso, zesifundazwe, zesifunda noma zombuso mayelana nenkampani yakho, i-LLC noma omunye umkhiqizo noma insizakalo kuzoba umthwalo wakho wedwa. Lokhu kufaka, kepha akukhawulelwe, ekufayeleni isimo sakho sokhetho seSahluko S Corporation. Ifomu lokufaka isicelo sesimo se-S-Corporation kufanele lisayinwe yisikhulu senkampani yakho. Njengoba singesona isikhulu senkampani yakho asikwazi ukusayina nokufaka leli fomu. Noma ngabe kunikezwa imisebenzi yesikhulu / yomqondisi / yemenenja eqokiwe, ngeke kudingeke ukuthi silifayele lelo fomu noma sithathe izinyathelo egameni lenkampani ngaphandle kokuthi ligunyazwe iqembu elifanele ngokubhala. Asithweswa icala lokulahleka noma amafomu entela afike sekwedlule isikhathi noma okunye ukufakwa, izenzo noma ukungenzi lutho ngaphandle kokuthi kube nokukhwabanisa ngamabomu, lapho kuphakanyiswa umuntu ophakanyisiwe, hhayi i-GCS. I-GCS iyinsiza yokulungiselela nokugcwalisa imibhalo hhayi inkampani yentela noma yezomthetho. Izidingo zentela nezomthetho kufanele zitholakale ngamalungu anamalayisense, anolwazi, asebenzayo kule mikhakha efana nabameli nababhali bama-akhawunti.
Uma, ngemali ethile, ucela usizo lwethu ukuvula i-akhawunti yasebhange, sizokwenza umzamo ukuvula i-akhawunti enelisa izidingo zakho. Kodwa-ke, uyavuma ukuthi i-GCS ayilawuli izinsizakalo ezinikezwa yibhange nokuthi ngamaphi amabhange angeke noma angavula uhlobo lwe-akhawunti oyifisayo, noma nemizamo yakho yokugcwalisa amadokhumenti asebhange adingekayo. Uyavuma ukuthi ibhange, kepha hhayi i-GCS, lilawula ijubane lapho i-akhawunti yasebhange izovulwa noma ingeke ivulwe. Uyavuma ukuthi unesibopho sokugcwalisa uhlelo lokuvula i-akhawunti yasebhange ngokuphelele futhi unikeze lonke ulwazi olucelwe yibhange ukuvulwa kwe-akhawunti.
Ngokuvamile kusifiso sakho esihle ukuthi ungaxhumana nebhange kuze kube lapho i-akhawunti ivuliwe. Isizathu ukuthi sibone amaklayenti amahlandla amaningi enza izitatimende ebhange noma ukuxhumana nebhange ngendlela yokunqanda ukuvulwa kwama-akhawunti.
Uyavuma ukubamba i-GCS ingenabungozi ezinqubomgomo nezinqubomgomo zebhange kufaka, kepha kungagcini kulokhu, okulandelayo: ibhange lenqaba i-akhawunti evulekile, ibhange lithathe isikhathi esiningi ukuvula i-akhawunti ukwedlula njengoba ufisa, ibhange licela imininingwane ethe xaxa ngaphambi kwebhange. izovula i-akhawunti, izinguquko kwinqubomgomo yasebhange, ukungakwazi ukuvula i-akhawunti ngebhange elinegatsha elingena kulo, isidingo sokwenza imali nokuhoxisa ngeposi kunokuba ungene ebhange, imali ethatha isikhathi eside ukucacisa kune iklayenti lifisa, ulimi lwangaphandle olusetshenziswa ebhange, ibhange alinikezi yonke imisebenzi ethandwa yikhasimende, kufaka phakathi, kepha alinganiselwe kwikhono lokufaka imali kwi-akhawunti noma ukuba khona noma ukungabi khona kwamakhadi wesikweletu noma wedebithi noma ubukhona noma ukungatholakali kwe-Intanethi kwi-akhawunti, noma ibhange elidinga ukuthi uhambe uye ebhange uqobo ngaphambi kokuba i-akhawunti ivulwe. Uma ibhange lidinga ukuvakasha unesibopho ngokuphelele sazo zonke izindleko zokuhamba nezokuhambisana nalo. Kwezinye izimo, okuwukuphela kwesinqumo esizwakalayo ukuvula i-akhawunti ebhange engenawo amagatsha okuhamba ahamba kahle kwikhasimende noma ebhange elingenawo amagatsha okuhamba. Uma ngabe lolu uhlobo lwe-akhawunti i-GCS ekwazi ukukuvulela yona, uyavuma ukuthi i-GCS isifezile isibopho sayo.
Akunasimo lapho i-GCS ibophezelekile ukubuyisa yonke imali ekhokhelwe imikhiqizo eyengeziwe nezinsizakalo ezithengiwe ngaphezu kwe-akhawunti yasebhange ngoba i-akhawunti yasebhange ayikwazanga ukuvulwa noma uma unganelisekile ngokukhethwa kwamabhange. Lokhu kunjalo noma ngabe isizathu esiyinhloko sokusungula inhlangano esemthethweni noma uku-oda izinsizakalo ezihambisanayo bekuyinjongo yokuvula i-akhawunti yasebhange noma ukuthi umnqamulajuqu obalulekile weqiwe ngenxa yokubambezeleka kokuvula i-akhawunti yasebhange. Isibonelo uma u-oda i-LLC ne-akhawunti yasebhange futhi nebhange lakho ozikhethele lona linqaba ukuvula i-akhawunti, ikhambi kuphela le-GCS, ngokuzikhethela kwayo, ukubuyisa kuphela leyo ngxenye yemali ekhokhelwe i-GCS eyibona ihlobene ne-akhawunti yasebhange ukuvulwa, izindleko eziphansi nesikhathi esenziwe, noma ukukunikeza enye inketho yasebhange. I-GCS yenze ucwaningo olunzulu ukuthola amabhange azovula ama-akhawunti ngaphandle kokuthi ube khona, okubona sengathi yizikhungo ezizinzile futhi ezinikeza insizakalo efanelekile. Kungumsebenzi wakho ukuqedela isicelo se-akhawunti yasebhange, ukuhlinzeka ngokuzikhandla okudingekayo nokunikeza eminye imibhalo ibhange eliyicelayo. Amabhange kudingeka ahlolwe amaklayenti awo ngomsebenzi wezomthetho nokuziphatha. Ukwehluleka ukwenza lokho kungaholela ekutheni ibhange lilahlekelwe yilayisense futhi / noma likhawulele amandla alo okwenza ukuthengiselana emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, amabhange awaziwa ngokwenza okwehlukile kuzidingo zawo zokuzikhandla.
Izidingo ezijwayelekile zokuvulwa kwamabhange zifaka, kepha azikhawulelwanga, ukugcwalisa isicelo se-akhawunti, ukusayina ikhadi lesiginesha, ukuhlinzeka ngekhophi yepasipoti yakho ebhalisiwe, incwadi yokuqala yokusetshenziswa enekheli lakho lokuhlala, imibhalo yenkampani yakho, ibhange kanye / noma ireferensi yobungcweti incwadi nezinye izidingo ezihlukahluka kuye ngebhange. Ibhange livame ukufona ukuqinisekisa ubuqiniso bemibhalo. Ngokukunikeza amagama asebhange i-GCS ibona ingenzeka futhi yenza umzamo wokukunikeza imibhalo yokuvula i-akhawunti yasebhange, i-GCS isifezile isibopho sayo ngaphansi kwalesi sivumelwano.
Uma u-ode izinto ezingeziwe noma izinsizakalo, okungeziwe, okuphindiwe, imibhalo yokuzikhandla efanele ingadingeka. Isibonelo, uma u-ode i-akhawunti yasebhange, umthetho ungadinga ukuthi ibhange ligcine isethi yakho yokuqala yezinkomba zakho kanye nemibhalo eyisithenjwa. Imithethonqubo ingadinga nokuthi umphatheli noma umhlinzeki wesevisi wenkampani abe nesethi yangempela yemibhalo efanelekile. Ngakho-ke, kungadingeka ukuthi unikeze amasethi amaningi woqobo.
AMATRASTI, ISIQINISEKISO SOKWENZA NEMIBHALO
Imithethonqubo yasekhaya neyamazwe omhlaba ikhona ukuvimbela ukukhwabanisa kwemali nokunye ukugcina noma ukuhamba kwezimali ezingekho emthethweni. Kanjalo, abaphatheli, abasebenza emabhange nabanye embonini yezinsizakalo zezezimali kudingeka ukuthi babone amaqembu afanelekile ukuhambisana nale mithetho futhi ukuze kuthi lapho kwenziwa izicelo zokuhoxa noma ezinye izicelo zenziwe, izinto eziyigugu zidluliselwe ezinhlanganweni ezifanele. Ngakho-ke, kunezidingo ezazi ikhasimende lakho okumele zihlangatshezwe. Umphatheli ngokuvamile ngeke ahlukanise nezidingo zokuzikhandla ngenxa yokuthi ukwenza kanjalo kungaholela ekuhlawulisweni kanye / noma ekulahlekelweni kwelayisense lokuqhuba ibhizinisi.
Okulandelayo uhlu lwemibhalo ethile, kodwa hhayi yonke, edingeka kakhulu kwiklayenti ukuze yakhe i-trust yamazwe omhlaba: Ifomu Lemininingwane Yokuhlolwa Kwamakhasimende, I-Afidavithi yeSolvency, Ubufakazi Bomthombo WeziKhwama, Idokhumenti Yemininingwane Yokwethemba, Imali ILawundering Control Act, Deed of Indemnity, Ikhophi lekhasi lesithombe lephasiphothi yakho (noma ikhophi yelayisense lakho lokushayela kwezinye izimo lanele) eliqinisekiswe ngokufanelekile yi-Notary Public, ubufakazi obubhalwe phansi bangempela bekheli lakho (kufanele kube okwangempela kwamuva Isikweletu somsebenzi, isitatimende sekhadi lesikweletu noma isitatimende sasebhange - kufanele kube okwangempela hhayi ikhophi), Incwadi eyinkomba yasebhange. Uzocelwa ukuthi usayine eminye yale mibhalo engenhla futhi unikeze nekhophi yepasipoti njengoba kushiwo ngenhla, isikweletu sosizo (noma okunye njengoba kushiwo) kanye nencwadi eyinkomba yasebhange. Uhlu olungenhla luhloselwe ukunikeza isibonelo semibhalo edingeka kakhulu kepha akukho siqinisekiso sokuthi amanye amadokhumenti ngeke adingeke kanye / noma ezinye izicelo ezenziwe.
Unesibopho sokuhlinzeka ngemininingwane yokuqedelwa kwe-trust, kufaka phakathi ukuthembela komhlaba, ukuthembela okuphilayo namanye amadokhumenti, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kumadokhumenti wamanga kanye nokusinikeza ngamagama enhlangano. Sisebenza umsebenzi wokulungiselela futhi singene ezindlekweni ngaphambi kokunikezela ngolwazi ukuze uqedele amadokhumenti akho. Ngakho-ke, ukwehluleka kwakho ukuhlinzeka ngolwazi esiludingayo ukufaka imininingwane yakho kumadokhumenti akusona isizathu sokubuyiselwa kwemali ngenxa yalezi zindleko zokulungiselela ezingeke zitholakale.
Ama-akhawunti womthengisi wekhadi lesikweletu asetshenziswa ukukhokhisa amakhasimende akho akhokha ngekhadi lesikweletu. Uma, ngemali ethile eyengeziwe, ucela usizo lwethu ukuvula i-akhawunti yomthengisi wekhadi lesikweletu, sizokwenza umzamo ukuvula i-akhawunti enelisa izidingo zakho. Noma kunjalo, uyavuma ukuthi i-GCS ayilawuli izinsizakalo ezinikezwa yinkampani ye-akhawunti yomthengisi, amanani anikezwayo, noma abathengisi ngeke bavule uhlobo lwe-akhawunti oyifisayo, noma imizamo yakho yokugcwalisa amadokhumenti e-akhawunti yomthengisi. Uyavuma ukuthi inkampani ye-akhawunti yomthengisi, kepha hhayi i-GCS, ilawula ijubane lapho i-akhawunti yomthengisi izovulwa noma ingeke ivulwe. Uyavuma ukuthi unesibopho sokugcwalisa uhlelo lwe-akhawunti yomthengisi ngokuphelele futhi unikeze lonke ulwazi olucelwe ukuvulwa kwe-akhawunti.
I-GCS AYIKHO ISIQINISEKISO SEZIMALI ZOKUTHENGA KANYE IMALI. LESI MITHETHO SENZIWE Yinkampani EZAQINISA IMERCHANT NGEMVA KOKUBA BABUYEKE ISICELO SAKHO. UYAVUMA UKUTHI I-GCS AKUFUNI KUPHELA UKUZE IZIMALI ZENZIWE Yinkampani YAMAKHAYA E-MERCHANT.
Uyavuma ukubamba i-GCS ingenangozi ngezinqubomgomo nemibandela ye-akhawunti yomthengisi kufaka phakathi, kepha kungagcini kulokhu, okulandelayo: inkampani ye-akhawunti yomthengisi enqaba ukuvula i-akhawunti, inkampani ye-akhawunti yomthengisi ethatha isikhathi esiningi ukuvula i-akhawunti kunalokho okufisayo, i-akhawunti yomthengisi inkampani ecela imininingwane engaphezulu ngaphambi kokuthi ivule i-akhawunti, idiphozi yokuqala edingwa yibhange, izinguquko kunqubomgomo, ukungakwazi ukuvula i-akhawunti ngamanani owafisayo, ukungakwazi ukuvula i-akhawunti yomthengisi ngemigomo oyifisayo, inkampani ye-akhawunti yomthengisi hhayi ukuhlinzeka ngazo zonke izinsizakalo noma amanani afunwa yikhasimende, kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwe, izimali, izinqolobane, izinqubomgomo zomthengisi nokunye.
Kwezinye izimo, okuwukuphela kokukhetha okufanelekile ukuvula i-akhawunti yomthengisi enkampanini ebiza amanani aphezulu kunamazinga ajwayelekile. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma inkampani ye-akhawunti yomthengisi ibheka ibhizinisi njengelesigaba "sobungozi obukhulu", noma ngabe iklayenti libona ukuthi ibhizinisi liyingozi enkulu noma cha uma iklayenti linomlando ohlanzekile noma irekhodi lomkhondo. Uma lolu uhlobo lwe-akhawunti i-GCS ekwazi ukukuvulela lona, ​​uyavuma ukuthi i-GCS isifezile isibopho sayo.
Akunakuphikwa ukuthi i-GCS ibophekile ukubuyisa yonke imali ekhokhelwe imikhiqizo eyengeziwe kanye nezinsizakalo ezithengiwe ngokungeziwe ku-akhawunti yomthengisi wekhadi lesikweletu ngoba inkampani ye-akhawunti yomthengisi ayikwazanga ukuvulwa noma uma ungagculisekile ngokukhethwa kwezinkampani ze-akhawunti yomthengisi . Lokhu kunjalo noma ngabe isizathu esiyinhloko sokuthi usungule ibhizinisi elisemthethweni noma wayala izinsiza ezihambisanayo kwakuyinjongo yokuvula i-akhawunti yomthengisi wamakhadi wesikweletu noma umnqamulajuqu obalulekile uphuthelwe ngenxa yokubambezeleka kokuvula i-akhawunti yomthengisi. Isibonelo uma u-oda inkampani ebambisene ne-akhawunti yomthengisi nenkampani ye-akhawunti yomthengisi oyenqabile ukuvula i-akhawunti noma ekhokhisa amanani aphezulu kunalokho okufisayo, ikhambi kuphela le-GCS, ngokukhetha kwayo, ukubuyisa kuphela leyo ngxenye yemali okukhokhelwe ukuthi kuthathwa yi-GCS kuhlobene nokuvulwa kwe-akhawunti yomthengisi noma ingxenye yemali eshiwo, engaphansi kwezindleko zephakeji, noma ukukunikeza enye inketho ye-akhawunti yomthengisi. Imali ekhokhelwa ukusungula i-akhawunti yomthengisi ikhokhwa kubantu besithathu ukwenza ukucubungula ubungozi, ngakho-ke iningi imali ekhokhwayo yokusungula umthengisi ayibuyiselwa ngokuphelele. I-GCS yenze ucwaningo olunzulu ukuthola izinkampani ze-akhawunti yomthengisi ezizovula ama-akhawunti amabhizinisi aphansi, aphakathi nendawo futhi anezinsizakalo, okuyinto ezwa ukuthi iyizikhungo ezinengqondo futhi inikezela ngomsebenzi ofanele. Ngokukunikeza amagama ezinkampani ze-akhawunti yomthengisi i-GCS ibona ingenzeka kakhulu futhi yenze umzamo ukukunikeza imibhalo yokuvula i-akhawunti yomthengisi noma yokudlulisela, i-GCS isifezile isibopho sayo ngaphansi kwalesi sivumelwano.
Uhlelo lwehhovisi, oluvame ukuba nenombolo yocingo, inombolo yefekisi nekheli lunikezwa njengethuba leklayenti kuphela. Inombolo yocingo yohlelo lwehhovisi imvamisa kakhulu ilandelana lapho kuphendulwa khona izinkampani eziningi. Ngakho-ke, iqembu elibizayo kufanele lishiya igama lenkampani ebabizele lona ukuze sazi ukuthi lowo myalezo uzodluliselwa kubani. I-GCS ayizibophezeli ngeposi elahlekile, izingcingo elahlekile, amafeksi, amathuba ebhizinisi alahlekile noma yikuphi ukulahleka. Njengokulindelekile, ukubuyiselwa kwemali akutholakali uma insizakalo iqala ngoba i-GCS inezindleko eziphelele zohlelo lwehhovisi ngaphambili.
ISIKWELETU SENKAMPANI NENKAMPANI ESEDALA / YOKUZIVIKELA
Le Migomo Yesevisi ichaza ubukhulu nemikhawulo yezibopho zeNkampani kwiKhasimende kanye Nenqubomgomo Yokusebenzisa Eyamukelekayo Yezinsizakalo Nemikhiqizo Yikhasimende. Inkampani kuzoba yiyona yodwa futhi ibe ngumxazululi wokugcina maqondana nokuhunyushwa kweSivumelwano. Ngokusebenzisa Imisebenzi Nemikhiqizo Yenkampani, iKhasimende liyavuma ukuboshwa yimigomo echazwe kulesi Sivumelwano.
Uma i-odiwe, iNkampani izonikeza inkampani noma inkampani enesikweletu esilinganiselwe kwiKhasimende. Inkampani izonikeza iKhasimende iphakethe elamukelekile nge-imeyili noma ngokulethwa kweposi. IKhasimende linomsebenzi wokugcwalisa iphakethe lokwamukela bese lilibuyisela ligcwaliswe kahle eNkampanini. Lapho iphakethe lokwamukela (elibhekisa isicelo kanye / noma eminye imibhalo eceliwe) seliqediwe yiKhasimende futhi libuyiselwa eNkampanini, iNkampani izothumela imininingwane kwaDun & Bradstreet ngenhloso, kepha hhayi isiqinisekiso, sokuhlinzeka ngezinsizakalo ezilandelayo :
I-1. Nikeza iphrofayili yesikweletu sebhizinisi nge-bureaus eyodwa noma amaningi ebhizinisi.
I-2. Shesha inqubo yokwakhiwa kwesikweletu yiNkampani noma abahlanganyeli bayo abakhokha imali ephumayo kwi-ejensi yokubika isikweletu (ies) uma usuyikhokhele inkonzo ebalekile.
3. Nikeza ngephothifoliyo ne-akhawunti yeDun & Bradstreet (D&B).
4. Dala imibiko eyinhloko ye-D & B eyisithupha.
5. Dala izikolo nezilinganiso ezi-5 ze-D & B emibikweni engu-6.
6. Thumela imininingwane ye-D & B abayicelile ukudala izikolo nezilinganiso ze-D & B.
I-7. Siza ekumiselweni kwamakhasimende ekusungulweni kwezinkomba ze-4-6 zokuhweba zenkampani.
8. Gada izikhundla zesikweletu eziyi-6 ze-D & B.
Ikhasimende lizokwenza okulandelayo:
I-1. Qeda kahle iphakethe lokwamukela bese ulibuyisela kubambisene neNkampani.
I-2. Nikeza lonke ulwazi olucelwe yiNkampani kanye / noma osebenzisana nayo ukuqeda iphrofayili yesikweletu.
I-3. Landela ukuqondiswa kweNkampani kanye / noma nabambisene nabo kwinqubo yokugcwalisa iphrofayili yesikweletu.
Inkampani endala noma inkampani eshalofini yinhlangano, i-LLC noma enye ibhizinisi elifanayo elisungulwe ngosuku lwangaphambilini.
UKUSETSHENZISWA KWEMISEBENZI YENKAMPANI NEMIKHIQIZO KUSENGOZINI YEKHASIMENDE. AKUSEBENZA INKAMPANI NOMA ABASEBENZI BAYO, AMA-AGENTS, ABADAYISISI BABATHENGISI BESITHATHU ABANIKEZA IMINININGWANE, ABAHWEBI BAMALAYISENSI NOMA ABANJALO, BENZE IZIMPIKISWANO, KUFAKA IZIMPAWU EZIBALULEKILE ZOKUQHUBEKA KWEZIMPAHLA, INGXENYE YABASEBENZI BOKUPHILA KWEZIMPAHLA KANYE NEZINSIZA NOMA BENZA ISIQINISEKISO NGEMIPHUMELA ENGATHOLAKALA EKUSETSHENZISWENI KWENKONZO KANYE NEMIKHIQIZO YENKAMPANI NOMA NGOKUQINISEKISA, NOMA UKUTHEMBEKA KWANOMA YILUPHI IMINININGWANE YOKWAZISWA NOMA IMERCHANDISE ETHETHWE NOMA Ehlinzekwa Inkampani Yenkampani Yenkampani Yenkampani. NGAPHANDLE KOKUTHI NGOKUNGAFANELEKILE KUVELA NGALESI SIVUMELWANO. LOKHU KUFAKA UKULAHLEKELWA UKUHAMBA PHAMBILI, NOMA KUBANGEKA UKUTHI KUBAMBEZELEKILE, NOMA UKUNGAKWAZI UKUTHOLA ISIKWELETU ESIFUNA UKUXHASHAZA UKUTHUTHA NGOKUTHI NOMA NGABE KUNGABANGELWA YINKAMPANI NABASEBENZI BAYO NOMA EZINYE IZIMBANGELA. AKUKHO IZINYE IZIVUMELWANO, NGOKUPHATHELENE NOKUTHI NGOKUNGAFANELEKILE. INKAMPANI AYIKHO UKUBOLEKISA NOMA INGAYONA INKAMPANI ENESIBOPHO SOKUHLELA IMALI mboleko YEKHASIMENDE. INKAMPANI IKHIPHA UMLANDO WESIKWELETU. IKHASIMENDE LIBHEKENE NOKUSEBENZISA IPHROFAYILI LESIKWELETU UKUTHOLA IMALILEKO NJENGOBA LITHOLAKALA FUTHI LIFISWA YIKHASIMENDE. I-ID YAMADODA EYONKE NOMA YERHAX YENKAMPANI ENGADALA / YESHELF AYIYOFANELE IQHAWE KAKHULU KWENKAMPANI FUTHI YANGABE IBE IQHUTSHELWE KAKHULU.
UKUTHENGA KAKHULU KOKUKHANYA KWAMAKHONO OKWENZIWA NGAMAKHAYA WONKE, NOMA YINI OLUNYE IZANGXENYE, KUFANELE KWENZIWE IFOMU, KUFAKA ISITOLO SENKONZO ESIMISELWE EKUVUNYELWELWELENI, ISITOLO NOMA ISITOLO SEZOBUCHWEPHESHE NGOKUKHANYA KWEZOBUCHWEPHESHE KWAMAKHONO OKUQULUNYELWE Yinkampani. Izinsizakalo ezingenhla zingathatha kufika ku-120 kuya ezinsukwini zebhizinisi ze-180 kusuka ngosuku iKhasimende libuya ngalo futhi Inkampani ithola iphakethe lokwamukela eligcwaliswe kahle.
NGENXA yokuthi KUNGENZEKA NGOKUQONDANA NOKUTHUTHUKISA IPHROFAYILI YESIKWELETI, IKHASIMENDE LIYAVUMELANA UKUTHI LINGAXHUMANANI NESITOLO SOKUBIKA I-AGENCY NGOKUQONDILE KUZE KUFIKE ISIKHATHI ESIFANELEKILE NGAPHANDLE KWESIVUMELWANO SENKAMPANI ESIBHALWE NGAPHAMBI KWESIKHATHI. IKHASIMENDE LIQONDA UKUTHI KUNOMSEBENZI OBALULEKILE WOKULUNGISELELA OWENZIWE NGAPHAMBI KOKUTHI IFAYILI LINGANIKEZELWA KWI-AGENCY YOKUBIKWA KWEZIKWELETI. UKUNGENISWA KWEFAYILI LESIKHATHI SOKUQALA NOMA OKUNGALUNGILE KOKUXHUMANA NESIKHUNGO SOKUBIKWA KWEZIKWELETI KUNGENZEKA UKUBA NEMIPHUMELA YOKUPHATHWA KWEZIKWELETI NAMAKHASIMENDE AYAMUKELA ISIBOPHO ESIPHELELE. IKHAMPANI LINGALETHA IMINININGWANE KWI-AGEDI YOKUBIKWA KWEZIKWELETI KODWA UNGAKULAWULI UKUHUNYUSHWA KWABO KWEDATHA, NGAKHO-KE AKUKHO SIQINISEKISO LOKUTHI BAZOHUMUSHA UKUTHOLA NJENGOKUNIKEZA IMIBIKO, IZIKHATHI NEZINGANISO EZIFISIWE, INGABE IYAQHUBEKA IYAQHUBEKA, INGABE IYAQHUBEKA YENZA I-DOPE KUZOPHELELWA UMA IWE I-AGENCE YOKUBIKWA KWEZIKWELETI UNGABAMBISANI NJENGOBA KUFISWA. Noma yiziphi izimali ezengeziwe njengengxenye yenqubo yokwakha izikweletu kuzoba umthwalo wekhasimende. Lokhu okulandelayo ngeke kukhokhelwe INKAMPANI njengoba kuyizinsizakalo ezinikezwa izinkampani ezivela eceleni. Lokhu kufaka phakathi, kepha akukhawulelwanga kwimali yokusetha ye-D & B kusuka ku-zero kuya kumakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye amadola, imali yokusetha i-akhawunti yokuhweba, izindleko zemikhiqizo evela kubathengisi, izimali zokufaka i-STATE, imali yelayisense yebhizinisi, ukusethwa kwefoni yebhizinisi noma okunye okuhlobene nefoni imali ekhokhwayo, izimali zokubika ngesikweletu somuntu siqu, imali ekhokhwa ebhange kanye nanoma yiziphi ezinye izimali ezijwayelekile enkambisweni ejwayelekile yebhizinisi. Konke lokhu okungenhla yizimali okufanele zilindelwe yinoma ngubani ohlela ukuba sebhizinisini.
Ikhasimende liyaqonda futhi liyavuma ukuthi kumele libambisane ngokuphelele NENKAMPANI ekusingatheni lolu daba, lenze konke okudingekayo ukuhlinzeka IKHAMPANI ulwazi olucelwe yiNkampani; futhi, leloKhasimende lizoshiya INKONZO ngaphansi kokuqondisa nokulawulwa KWENKAMPANI inqobo nje uma lesi sivumelwano siqhubeka ukusebenza, futhi iKhasimende ngeke linikeze imininingwane kunoma iyiphi enye inhlangano noma abantu abathintekayo noma baxhumane ngokuqondile nanoma yimuphi omunye umuntu noma ibhizinisi mayelana nodaba ngaphandle kwalapho kuqondiswe Yinkampane NJENGALOKHO KUNGENZEKA NGESIFUNDAZANE SOKUTHOLAKALA KOMCULO.
Ngaphezu kwalokho, iKhasimende liyavuma ukukhokha ngesikhathi wonke amabhizinisi weKhasimende nezikweletu / ama-akhawunti afaka phakathi kepha angagcini kumugqa wesikweletu, amakhadi esikweletu, ama-akhawunti ajikelezayo kanye nemalimboleko. Ikhasimende liyavuma ukungasifaki isicelo sesikweletu ngaphandle kokunikeza isaziso ngaphambi kwenkampani. Ikhasimende liyavuma futhi ukuthi inani eliphelele lesikweletu eliQASHWE INKAMPANI njengabaluleki ukusiza ukuthola inani eliphelele lemizamo yekhasimende kanye NENKAMPANI.
Kusukela manje, iNkampani igcina ilungelo lokuguqula lesi Sivumelwano nganoma yisiphi isikhathi futhi ngezikhathi ezithile futhi noma yikuphi ukuguqulwa kuzosebenza ngokuzenzakalelayo njengawo wonke amakhasimende lapho amukelwa yiNkampani futhi kushicilelwe ekhasini elingezansi le-https: // izinkampani .com / noma indawo elandelayo njengoba iwebhusayithi ingavuselelwa.
Yize igama lakho noma umuntu omqokayo zizovela kumadokhumenti adlulisela inkampani yakho kuwe noma othandekayo wakho, uyavuma ukuthi igama lakho noma idlozi lakho lingabonakala noma lingabonakali kwimibhalo yokufakwa noma izindatshana zenhlangano. Kunombhalo ohlukile odlulisela inkampani kuwe noma kumuntu obambeleyo. Lokhu kucishe kufane negama lomenzi wezimoto osele emotweni, lapho-ke idokhumenti yesihloko isetshenziswa njengokudluliselwa okusemthethweni. Ngokufanayo, thina noma abenzeli bethu sakha i-Corporate njengombambisi? bese wakhe inkampani enesikweletu esilinganiselwe njengomhleli ?? bese ukhipha imibhalo edlulisela inkampani kuwe. Kwezinye izimo, inkampani yethu noma umuntu esimqokile uzoba yisikhulu sokuqala, umqondisi, ilungu noma umphathi wenkampani. Uyavuma ukuthi ukudluliselwa kwenkampani kuwe kuvame ukuvela kumadokhumenti okudlulisa hhayi imibhalo uqobo.
Uma u-ode insizakalo ebandakanya ukudluliselwa kwemeyili, uzokhokha okuposwayo nokuphatha izinto ezithunyelwe kuwe. Idiphozithi yamadola angamashumi amabili nanhlanu aseMelika, noma ngaphezulu uma uchaza, izongezwa kwizindleko zensiza yakho yokuthumela imeyili. Le diphozithi izovuselelwa ngokuvunywa kwakho. Usigunyazisa futhi ukuthi sikhokhise ikhadi lakho lesikweletu ngefayela ukumboza izindleko zokuthumela zamaphakeji.
Kungaba nezimali ezingeziwe ezingefani ezihlobene ne-oda lakho esingazicela ezingafakwanga ohlwini lwewebhusayithi yethu. Lezi zimali zingaba ngezindleko ezengeziwe zokuhambisa, ukufaka izincwadi ngokusemthethweni, amaphakheji wokubonisana, izimali zokuvuselela, noma ezinye izimali noma izinto ezingalindelekile ezingahle zihlotshaniswe ne-oda lakho noma ukukhushulwa kwezindleko zethu ezidingekayo eziphuma ephaketheni esaziswe ngazo ngaphambi kokushicilelwa kwethu amanani abuyekezwe. Amakheli akule webhusayithi namawebhusayithi axhumene nawo angahle noma angahle abe sesikhathini. Abanye noma bonke abamele inkampani basebenza ezindaweni zokuhlala ezikude kunokuba basebenze endaweni eyodwa emaphakathi yebhizinisi. Amanye amakheli afakwe kuhlu futhi izithombe, kufaka phakathi kepha kungagcini ezithombeni zezakhiwo, zikhonjisiwe ngezinjongo zomlando futhi azimeli isimo esikhona njengamanje. Sicela uqiniseke ukuthi uthinta umuntu omele ikheli elifanele ngaphambi kokuthumela izincwadi. IGeneral Corporate Services, Inc. yafakwa okokuqala ngoJuni umhla wesishiyagalombili ngonyaka namakhulu ayisishiyagalolunye nesithupha esifundazweni saseMelika i-Nevada. Abanini bamanje benkampani bayithole ngomhla kaJanuwari noma cishe ngoJanuwari wesithathu ngonyaka ezinkulungwaneni ezimbili nesishiyagalombili. Le nkampani ibingekho emugqeni wayo wamanje webhizinisi ngesikhathi sokuphila kwayo. Igama lenkampani selishintshile futhi inkampani ivuselelwe, yachitshiyelwa yabuyiselwa. Uyavuma ukungathembeli kubudala be-GCS njengesizathu sokuqhuba ibhizinisi nathi. Lesi sivumelwano sonke sithinta yonke imisebenzi yamanje neyesikhathi esizayo phakathi kwamaqembu.
Uyavuma ukuthi singabuyekeza imigomo nemibandela yalesi Sivumelwano futhi siguqule izinsizakalo ezinikezwe ngaphansi kwalesi Sivumelwano. Noma yikuphi ukubuyekezwa okunjalo noma ushintsho kuzoba okubopha futhi kusebenza ngokushesha ekuthumeleni inguqulo ebukeziwe. Isivumelwano noma ushintsho kusevisi (s) kuwebhusayithi yethu, noma ekwazisweni nge-imeyili noma ngeposi elijwayelekile. Uyavuma ukubuyekeza iwebhusayithi yethu, kufaka lesi Sivumelwano, ngezikhathi ezithile ukuze wazi noma iziphi izibuyekezo ezinjalo. Uyavuma ukuthi, ngokuqhubeka nokusebenzisa izinsizakalo zethu kulandela isaziso sokubuyekezwa kwalesi Sivumelwano noma ushintsho kumasevisi, uthobela noma iziphi izibuyekezo noma izinguquko ezinjalo.
Uyavuma ukuthi isikweletu sethu sonke, nekhambi lakho elikhethekile, maqondana nanoma yiziphi Izinsizakalo ezinikezwe ngaphansi kwalesi Sivumelwano kanye nanoma yikuphi ukwephula kwalesi Sivumelwano kukhawulelwe enanini olikhokhele la masevisi. I-GCS ngeke ibe nesibopho sokukhokhiswa okuthe ngqo, okungaqondile, okwenzekile, okuyisipesheli noma okubangelwa ukusetshenziswa noma ukungakwazi ukusebenzisa enye yezinsizakalo noma izindleko zokuthengwa kwempahla etholwayo. Ngoba ezinye zithi, izifundazwe noma amazwe akuvumeli ukufakwa noma ukukhawulelwa kwesibopho sokulimala okubangelwa noma okuphathelene nakho, kuzifunda ezifana nalezi, izifundazwe noma amazwe, isikweletu sethu sikhawulelwe ngezinga elivunyelwe ngumthetho. Lapho ukubhaliswa kwamagama ezinkampani sekucutshunguliwe, ayikhanselwa futhi ayibuyiselwa. Ngaphambi kokuthumela i-oda lakho, hlola kabili isipelingi nokunemba kwegama lakho lezinhlangano.
I-GCS yenqabe noma ikuphi ukulahleka noma isikweletu esivela, kepha kungakhawulelwe ku-: (1) ukulahleka noma isikweletu esibangelwa ukulibaziseka kokufinyelela noma ukuphazamiseka kokufinyelela; (2) ukulahleka noma isikweletu esibangelwa ukungalethwa kwedatha noma ukulethwa kwedatha okungafanele; (3) ukulahleka noma isikweletu esivela kwizenzo zikaNkulunkulu; (4) ukulahleka noma isikweletu esivela emaphutheni, okungekho, noma okungalungile kunoma imiphi imininingwane enikezwe ngaphansi kwalesi Sivumelwano.
Uyavuma ukuthi ngeke sibe nesibopho sokulahleka kokubhaliswa nokusetshenziswa kwegama lenkampani elibhalisile, noma ukuphazamiseka kwebhizinisi, noma yimuphi umonakalo ongaqondile, okhethekile, ohilelekile, noma olandelanayo wanoma yiluphi uhlobo (kufaka phakathi inzuzo elahlekile) kungakhathalekile uhlobo lwe isenzo noma ngabe senkontileka, ukuhlukunyezwa (kufaka phakathi ubudedengu), noma ngenye indlela, noma ngabe selulekisiwe ngamathuba omonakalo onjalo.
Uyavuma ukusidedela, usihlawulele, futhi usibambe, osonkontileka bethu, amanxusa, abasebenzi, izikhulu, abaqondisi, abanikazi kanye nabasebenzisana nabo abangenabungozi kuzo zonke izikweletu, izimangalo nezindleko, kufaka phakathi nezimali zommeli, zezinkampani zangaphandle eziphathelene noma ezivela ngaphansi kwalesi Sivumelwano, Izinsizakalo ezinikezwe ngezansi noma ukusebenzisa kwakho Izinsizakalo, kufaka phakathi ngaphandle kokwephula umthetho wakho kunoma iyiphi impahla yengqondo noma elinye ilungelo lobunikazi lanoma yimuphi umuntu noma inhlangano, noma ukwephulwa kwanoma yimiphi imithetho yethu yokusebenza noma inqubomgomo ephathelene nensizakalo enikeziwe . Uma i-GCS isongelwa ngokumangalelwa ngumuntu wesithathu, singafuna isiqinisekiso esibhaliwe kuwe mayelana nesithembiso sakho sokusihlawulela. Ukwehluleka kwakho ukunikeza lezo ziqinisekiso kungathathwa njengokwephula isivumelwano sakho.
Uyavuma ukuthi ukwehluleka ukuthobela noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi Sivumelwano kungabhekwa yithi njengokwephula izinto ezibonakalayo nokuthi singakunikeza isaziso esibhalwe phansi, esichaza ukwephulwa, kuwe. Noma ikuphi ukwephulwa kwakho ngeke kuthathwe njengokuxolelwa ngenxa yokuthi asenzanga ekuqaleni ukuphendula lokho, noma okunye ukweqa kwakho.
I-GCS ifuna ukuhlinzeka ngamanani entengo afanele futhi ancintisanayo. I-GCS inelungelo lokushintsha ukwakheka kwayo kwentengo ngasikhathi ngaphandle kwesaziso. Isibonelo, isilinganiso esisodwa singacashunwa sokuvuselelwa kohlaka lwebhizinisi lapho ukuthengiselana kokuqala kuqediwe, kodwa lelo nani lingashintsha ngokuzayo lapho ukuvuselelwa kufanele ngenxa yezimali zikahulumeni ezikhushulwe ngokungalindelekile noma ezikhokhweni zepokhethi, noma ezinye izizathu. Izitatimende ezenziwe yi-GCS esihlangabezana nazo / noma ezishaya amanani entengo esincintisana nazo kufanele zihunyushwe njengoba sihlala sishaya amanani entengo esincintisana nawo futhi sinelungelo lokushaya amanani entengo esincintisana nawo ngokuwukuphela kwendlela ye-GCS. I-GCS ayibophezelekile ukubuyisa umehluko phakathi kwe-GCS namanani encintisana nawo ngemuva kokuthi ukuthengisa kuqediwe.
Uyavuma ukuthi, ngokubhaliswa noma ukubhuka igama lakho lebhizinisi olikhethile, lokho kubhaliswa noma ukubhuka akunikezi ukuzivikela ekuphikisweni kokubhaliswa, ukubekiswa, noma ukusetshenziswa kwegama lenkampani. Ngaphezu kwalokho, awungekhe uthembele eqinisweni lokuthi ibhizinisi lakho selakhiwe, futhi amakhadi ethu ebhizinisi, i-letterhead, noma ukufaka ezinye izindleko ezinegama lenkampani yakho kuze kube NGEMVA kokuba usuthole amadokhumenti okuqala, wesifundazwe, wesifundazwe noma kahulumeni wesifundazwe. . (Ezinye izifundazwe, izifundazwe noma amazwe azokhipha "iSitifiketi" sokufakwa, ngokwesibonelo).
Uyavuma futhi uyaqinisekisa ukuthi imininingwane osinikeza yona yokubhalisa noma yokugcina igama lebhizinisi lakho, ngokwazi kwakho nenkolelo yakho, inembile futhi iphelele, nokuthi noma iluphi ushintsho oluzayo kulolu lwazi sizonikezwa lona ngesikhathi esifanele ngokuya ngezinqubo zokuguqulwa ezazikhona ngaleso sikhathi. Uma i-oda lakho lifakwe ngommeleli, uzokwenza imizamo ebambisene yokubhala imininingwane efanele mayelana negama lenkampani oyikhethile, igama lakho, ikheli kanye neminye imininingwane. Kodwa-ke, amaphutha noma ukutolikwa okungalungile kuyenzeka. Uzobamba i-GCS ingenangozi ngamaphutha anjalo noma ukutolikwa okungalungile. Okukhethwa kukho okuhle kakhulu ukuthi unikeze imininingwane ngokubhala nge-imeyili noma ezinye izindlela zikagesi ukusiza ukunikela ngemininingwane ethe xaxa. Uyavuma ukuthi ukusebenzisa kwakho Izinsizakalo zethu kungengcuphe yakho kuphela. Uyavuma ukuthi lezo Zinsizakalo zinikezwa ngesisekelo “njengoba sinjalo,” “njengoba kutholakala”. Sizikhipha ngokusobala zonke iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, noma ngabe ziveziwe noma zishiwoyo, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kumawaranti ashiwo wokuthengiseka, ukufaneleka kwenjongo ethile nokungaphuli umthetho. Asenzi iwaranti yokuthi Izinsizakalo zizohlangabezana nezidingo zakho, noma ukuthi Izinsizakalo zizofika ngesikhathi, zivikeleke noma zingabi namaphutha; futhi asenzi siqinisekiso semiphumela engatholakala ekusetshenzisweni kwezinsizakalo noma ngokunemba noma ngokuthembeka kwanoma yiluphi ulwazi olutholakele.
Mina, ngokubona kwethu kuphela, sinelungelo lokwenqaba ukubhalisa noma ukugcina igama lakho lebhizinisi elikhethiwe. Uma kwenzeka senqaba ukubhalisa noma ukugcina igama lakho lenkampani, siyavuma ukubuyisa imali (imali) yakho esebenzayo. Uyavuma ukuthi ngeke sikubekelele icala ngokulahleka noma ngomonakalo ongabangelwa ukwenqaba kwethu ukubhalisa igama lakho lebhizinisi.
Izihloko zezigaba eziqukethwe kulesi sivumelwano zenzelwe izinqumo kuphela futhi ngeke zithinte okushiwo noma ukuhunyushwa kwalesi sivumelwano.
Esimweni lapho noma yikuphi ukuhlinzekelwa kwalesi Sivumelwano kubanjwa kungabekezelelwa, lezo zinhlinzeko zizokhawulelwa noma ziqedwe ngezinga eliphansi elidingekayo ukuze Isivumelwano siqhubeke sisebenza ngokuphelele futhi sisebenze.
Uyavuma ukuthi lesi Sivumelwano singesivumelwano esiphelele nesisodwa phakathi kwakho nathi maqondana nezinsizakalo zethu. Lesi Sivumelwano sidlulisa noma yiziphi izivumelwano nokuqonda kwangaphambili, noma ngabe kusungulwe ngesiko, ukuzijayeza, inqubomgomo noma okwandulelayo.
Lesi Sivumelwano senziwa esifundazweni saseMelika iFlorida futhi sizothathwa ngokuya ngemithetho yaseFlorida, ngokukhetha imithetho yezomthetho esiyikhethile. Iqembu ngalinye kulesi Sivumelwano lithumela kumandla akhethekile oMbuso kanye Nezinkantolo Zasezifundazwe ezinamandla ku-County of Broward esifundazweni saseFlorida, futhi lihoxisa noma yiziphi iziphathimandla, indawo, noma ukuphikisana kwesithangami esingesihle kulezi zinkantolo. Kunoma isiphi isenzo sokuphoqelela lesi Sivumelwano, iqembu elikhona lizoba nelungelo lokuthola izindleko ezifanele zenkantolo nezimali zommeli.
Lesi Sivumelwano sihlanganisa sonke isivumelwano phakathi kwakho ne-GCS futhi sifaka noma yisiphi isivumelwano sangaphambilini, kungaba ngomlomo noma sibhaliwe, phakathi kwakho ne-GCS.
-Siyabonga ngokukhetha i-General Corporate Services, Inc. kanye nemikhiqizo yethu esebenzisana nayo njengenkonzo yakho yokugcwalisa.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka ongase ube nakho.
I-General Corporate Services, Inc.
I-Pompano Beach, i-FL 33064
I-Toll-Free: + 1-888-234-4949
Okuqondile / Int'l: + 1-661-310-2930
Oxhumana naye nge-elekhtronikhi: Ifomu eliphelele lokubuza kuleli khasi